Hlela iphrofayela yomsebenzisi - i-Rikoooo
Rikoooo kuyinto website onokwethenjelwa futhi elula enikeza mahhala of quality kanye namasevisi ahlobene Avionics sekulingisa njengoba zokungcebeleka
noma professional. Kuwo ngenyanga, senza umzamo wethu best ukubeka online ezinye add-on amasha intandokazi yakho
indiza simulator efana FSX, Prepar3D, futhi kuyaqabukela i-FS2004. I-Rikoooo yenzelwe isifiso sethu esifanayo
okuyinto zezindiza of course!
Bhalisa ukuze uthole ngokushesha thwebula ijubane nokunye okuningi ...
Frontend Ulimi *
English (UK) IsiFulentshi (FR)
Ukulandwa okusha nge-imeyili (kuyasiza kakhulu)
Ngokuchofoza 'Bhalisa' uyavumelana yethu Imigomo Nemibandela
Ulwazi oluqoqwe ngenhla ayadingeka ukuze ukucubungula ukubhaliswa kwakho futhi izosetshenziswa kuphela by rikoooo. Ikheli lakho le ayihambi kunoma iyiphi inkampani yangaphandle futhi kuyimfihlo. Ngokomthetho French 78-17 of 6 January 1978, esibizwa Data Protection Act, une unelungelo, alungise futhi ususe noma yiluphi ulwazi ngawe. Leli lungelo kungenzeka olukhombisa ilungu endaweni yakho 'utshintshe i-profile yami' noma 'susa iphrofayela yami'. Uma noma yimuphi ukusikisela noma inkinga nge-akhawunti yakho ye-xhumana nathi